Eken’ny Kaomisiona Momba ny Zon’Olombelona Ao Etipoia Fa nisy Mpanao Fihetsiketsehana Maty, Saingy Tsy Sahiny Ny Hanome Tsiny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Eken'ny Kaomisiona Momba ny Zon'Olombelona Ao Etipoia Fa nisy Mpanao Fihetsiketsehana Maty, Saingy Tsy Sahiny Ny Hanome Tsiny Governemanta
Voadika ny 26 Avrily 2017 4:56 GMT
Hetsipanoherana iray tamin'ny Oktobra 2016 tao Londona nataon'ireo vahoaka Oromo noho ny famonoana sy fanitsakitsahana zon'olombelona nataon'ny governemanta Etiopiana. Sary an'ilay mpampiasa Flickr David Holt. CC BY 2.0
Nanambara ny Kaomisionan'ny Governemanta Etiopiana momba ny Zon'Olombelona fa nisy 669 ny olona maty nandritra ilay fitroarana tamin'ny 2016, tarehimarika izay ambany lavitra noho ny isa notaterin'ny Human Rights Watch sy Amnesty International.
Tamin'ny 18 Aprily no namborahana ilay tatitra tao amin'ny parlemana izay tena fehezin'ny fanjakana tanteraka. Addisu Gebregziabher, filohan'ny Kaomisiona Etiopiana momba ny Zon'Olombelona, no namaky ireo tena vokatry ny asa teo anoloan'ny parlemanta etiopiana, izay nametraka ny ampahany betsaka tamin'ny vesatry ny andraikitra tamin'ilay rà nandriaka ho an'ireo vondrona mpanohitra: “Nitranga ny herisetra satria nampiasa fitaovampiadiana ireo mpanao hetsipanoherana ary tsy nanana safidy afa-tsy izany sisa ireo mpitandro filaminana”. Nolazain'i Gebregziabher ho ny “fitavozavozàn”ireo mpitandro filaminana ihany koa no isan'ny singa nanampy, na atao hoe bitika aza izany.
Marobe anefa ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona no nitatitra fa ny fitifiran'ny mpitandro filaminana ireo mpanao hetsipanoherana tsy nitondra afa-tsy tanàm-polo no tena antony.
Mandra-pitonin'ilay hetsika tamin'ny Oktobra 2016, rehefa nanambara ny fisian'ny tany latsaka an-katerena ny fanjakana etiopiana, an'aliny ireo nanao hetsipanoherana nanerana an'i Etiopia. Ny Aprily 2014 no nanombohan'ireo hetsipanoherana tao Oromia, iray amin'ireo fanjakana federaly miisa sivy lehibe indrindra ara-poko, nanoherany ny drafitra iray hanitarana ny faritry ny sisintanin'i Addis-Ababa, renivohitr'i Etiopia ho any amin'ireo vohitra sy tanàna manodidina an'i Oromia. Efa ara-tantara no niharan'ny fanenjehan'ireo nitàna ny fahefana tao Etiopia ny vahoaka Oromo, ary ilay drafitra dia noraisina ho toy ny fanitsakitsahana iray hafa indray ny zon'izy ireo. Nandritra ireo volana maro taty aoriana, niitatra nankany amin'ireo fanjakana hafa ireo hetsipanoherana, nahitàna ireo mpandray anjara nifamory tao andamosin'ireo fitairanana betsaka miantefa tamin'ny governemanta.
Tamin-kerisetra no namalian'ny governemanta, araka ny nambaran'ny Amnesty International, raha kely indrindra 800 no olona maty, raha ireo vondrona mpanohitra sy ireo mpikatroka mafàna fo kosa manome ny isa ho an'aliny maro.
Ny tatitra nambaran'i Gebregziabher dia manatsiny ireo vondrona mpanohitra, ireo foibenà fahitalavitra mandeha amin'ny zanabolana tantanin'ireo any am-pielezana, indrindra indrindra fa ny Oromo Media Network, sy ny media sosialy, noho ny fitrandrahana ny “tsy fisian'ny fahaizana mitantana” mibahan-toerana ao Etiopia hanairana herisetra.
Tsy hita ao amin'ny tranonkalany ilay tatitra efa nandrasana ela avy amin'ny fanadihadian'ilay Kaomisionan'ny Zon'Olombelona ; ilay Fana Broadcasting, vondron'orinasa mifamatotra amin'ny fanjakana , dia tsy nanome rohy mankany amin'izy io tao amin'ny tati-baovaony. Kanefa, ny Al Jazeera dia nanatsofoka lahatsary iray mampiseho ny faemelabelaran'i Gebregziabher tao amin'ny parlemanta. Ny ankamaroan'ìireo tati-baovao dia nifototra tamin'ny famintinana ny famelabelarana ho an'ireo parlemantera, izay nafantoka betsaka tamin'ny isan'ireo olona maty sy ny faharavàm-pananana.
Tsy nomarihan'ireo tati-baovao raha noresahan'ilay tatitry ny kaomisiona ireo fampijaliana, ireo fitazonana tsy an-drariny, ary ireo fepetra ratsy iainana amin'ny fitazonana am-ponja. Ireo fikambanana iraisampirenena toy ny Human Rights Watch, ny Amnesty International, ary ny Freedom House dia mazàna no manipika porofo mampiseho ny fitombon'ireny olana ireny ao Etiopia. Toy izany koa, ny Filankevitra Etiopiana momba ny Zon'Olombelona, ilay hany fikambanana tsy miankina ao an-toerana misahana ny resaka zon'olombelona ao amin'ilay firenena, dia nitatitra ihany koa ny tahan'izy ireny.
Saingy mampisalasala ireo vaovao mivaingana momba ny fampijaliana, ny fitazonana tsy an-drariny, ary ireo fepetra ratsy iainana amin'ny fitazonana am-ponja tao anatin'ireo tatitra tany aloha avy amin'ny Kaomisiona momba ny Zon'Olombelona ao Etiopia.
Ho setrin'ilay tatitra, i Seyoum Teshome, izay nandany volana efatra raha kely indrindra tany am-ponja nandritra ny hetsipanoherana, dia nanoratra hoe : “Andriamanitra anie hanafaka antsika amin'ny Kaomisiona mpanaiky lembenana momba ny Zon'Olombelona, izay manakivy vahoaka”.
Andro iray talohan'ny namoahana ilay tatitra, nolavin'ireo Etiopiana manampahefana ny fangatahana nataon'ny Firenena Mikambana sy ny Fiombonambe Eoropeana handefa mpanadihady mahaleotena handinika ireo filazàna fisianà fanitsakitsahana zon'olombelona. Raha niresaka tamin'ny “BBC Africa”, nilaza ny praiminisitra Etiopiana, Hailemariam Desalegn, fa ananan'i Etiopia ireo andrim-panjakana mahaleotena afaka manao samirery ny fanadihadiana tahàka izany.
Kanefa, rehefa jerena akaiky ny mpitondra tenin'ny Kaomisiona Etiopiana misahana ny Zon'Olombelona, Addisu Gebregziabher, dia mivoitra fa misy fifamatorana akaiky eo aminy sy ny governemanta ary misy tombontsoa tsy azo tsinontsinoavina ny fitazonana ny zavamisy ho amin'izao endriny izao. Tany amboalohany, nitazona toerana tao amin'ny Ministeran'ny Raharaham-Bahiny i Gebregziabher ary efa lefitry ny filohan'ny Filankevitra Nasionaly Etiopiana misahana ny Fifidianana sy nanaraka ny fifidianana parlemantera tamin'ny May 2015, izay azon'ny antoko EPRDF eo amin'ny fitondrana. Nitarainan'ny mpanohitra ny fisianà tsy fanarahan-dalàna nandritra sy talohan'ny fandatsahambato.
Hatramin'ny Novambra 2015, faribolana mtondra faharavàna avy aminà hetsipanoherana sy famoretana no niainan'i Etiopia. Navoakan'ny Kaomisiona misahana ny Zon'Olombelona ao amin'ilay firenena ny vokatry ny fikarohany mitovy amin'io tamin'ny Jona, saingy ao anatiny dia tsy noraisina ho tomponandraikitra ireo izay tomponantoka tamin'ireny famonoana ireny, ary nihalefy ho azy fotsiny ireo hetsipanoherana tamin'ny Oktobra 2016 rehefa nambaran'ny manampahefana ny maha-tany latsaka an-katerena. Miaraka amin'ireo fonja ao Etiopia feno mpanohitra ara-politika, tsy nanao afa-tsy ny nanalalina kokoa ny kizo ilay tatitra farany no sady tsy nahavita niresaka ny fototry ny fahasorenana.
Ginea-Bisao 22 ora izay